MM Live News - Page 491 of 578 - MEDIA AND ENTERTAINMENT
ဒီနှစ် ၁၃၈၀ ( ၂၀၁၈ ) ထဲမှာ သတိထားရမယ့် အမည်တွဲမျာ
October 18, 2018 MM Live News13 Comments on ဒီနှစ် ၁၃၈၀ ( ၂၀၁၈ ) ထဲမှာ သတိထားရမယ့် အမည်တွဲမျာ
Zawgyi ဒီနှစ် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ မြန်မာ့ရိုးရာမဟာဘုတ်ပညာအရ တစ်ခုကြွင်းတဲ့ ဇာတာခွင်နှစ်မှာ အောက်ပါ အမည်တွဲပိုင်ရှင်များ ဂရုစိုက်ရပါလိမ့်မယ်။ (၁) တနင်္ဂနွေနံအစ + တနင်္ဂနွေနံအဆုံး အမည်ပိုင်ရှင်များ (ဥပမာ….အောင်အောင် ၊ အေးအေး ၊ အေးမြတ်ဦး ၊ ဥက္ကာအောင် …စသည်..) (၂) ဗုဒ္ဓဟူးနံအစ + ကြာသာပတေးနံအဆုံး အမည်ပိုင်ရှင်များ ကြာသာပတေးနံ အစ + ဗုဒ္ဓဟူးနံအဆုံး အမည်ပိုင်ရှင်များ (ဥပမာ ….၀င်းမြင့်၊ မြင့်ဝေ ၊ လင်းလက်မိုး ၊ မြင့်သိန်းလွင် ၊ မြချယ်ရီ၊ ရွှေဇင်မှုး စသော အမည်ပိုင်ရှင်များ..) (၃) ဗုဒ္ဓဟူး ၊ ကြာသာပတေးနှင့် တနင်္ဂနွေ သုံးမျိုး မည်သို့ပင် တွဲထားသည် ဖြစ်စေ […]
အထက (၇) မင်္ဂလာဒုံသို့ ရုတ်တရက် ပြောင်းရွှေ့ခံရသည့် ကမာရွတ် TTC ကျောင်းအုပ် ဒေါက်တာ မိုးသူ မှ နိုင်​ငံ​တော်​အတိုင်​ပင်​ခံပုဂ္ဂိုလ်​ထံ အသနားခံစာတင်
October 18, 2018 MM Live News13 Comments on အထက (၇) မင်္ဂလာဒုံသို့ ရုတ်တရက် ပြောင်းရွှေ့ခံရသည့် ကမာရွတ် TTC ကျောင်းအုပ် ဒေါက်တာ မိုးသူ မှ နိုင်​ငံ​တော်​အတိုင်​ပင်​ခံပုဂ္ဂိုလ်​ထံ အသနားခံစာတင်
အထက (၇) မင်္ဂလာဒုံသို့ ရုတ်တရက် ပြောင်းရွှေ့ခံရသည့် ကမာရွတ် TTC ကျောင်းအုပ် ဒေါက်တာ မိုးသူ မှ နိုင်​ငံ​တော်​အတိုင်​ပင်​ခံပုဂ္ဂိုလ်​ထံ အသနားခံစာတင် Credit: Yangon Media Group အထက (၇) မငျြဂလာဒုံသို့ ရုတတြရကြ ပှောငြးရှခေံ့ရသညြ့ ကမာရှတြ TTC ကွောငြးအုပြ ဒေါကတြာ မိုးသူ မှ နိုငြ​ငံ​တြော​အတိုငြ​ပငြ​ခံပုဂျဂိုလြ​ထံ အသနားခံစာတငြ Credit: Yangon Media Group
မည်သည့် ကိစ္စမဆို အလွန်အကျိူးထူးစေသော ဂုဏ်တော် ပုတီးစိပ်နည်း….
October 18, 2018 MM Live22 Comments on မည်သည့် ကိစ္စမဆို အလွန်အကျိူးထူးစေသော ဂုဏ်တော် ပုတီးစိပ်နည်း….
ဂုဏ်တော် 9ပါးကို ပုတီး (10)ပတ်ရအောင်ခွဲ၍ စိပ်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။မည်သည့်နေ့သားသမီးမဆို တနင်္ဂနွေနေ့ ည. 9နာရီမှည 12နာရီအတွင်း အဆင်ပြေချိန်တွင် စိပ်ပါ။ နောက်တစ်ပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ထိ (8)ည တိတိ ညစဉ် စိပ်ပါ။နေ့စဉ် 10ပတ် စိပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။စိပ်ရမယ့် အချိန်အတူတူပါဘဲ။ ဘုရားရှင်အား သောက်တော်ရေချမ်းများ ဖယောင်းတိုင် အမွှေးတိုင်များပူဇော်၍စိပ်ပါ။သတိပြုရန်မှာပုတီးစိပ်နေသော 8ရက်အတွင်းတွင်မိမိအလိုချင်ဆုံးအဖြစ်ချင်ဆုံးဆုတစ်ခုသာတောင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ပုတီးစိပ်နည်းကို အလုပ်ရှာနေသော ညီမငယ်တစ်ဦးအား စိပ်စေရာ တစ်လအတွင်း ခန့်မှန်းထားသည်ထက် လစာပိုကောင်းသော အလုပ်ရသွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေ၍ မိဘအိမ်ပြန်နေသူ ညီမငယ်တစ်ဦးက. ပုတီးစိပ်ပြီး ရက် 20အကြာတွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှ မိဘများအားတောင်းပန်၍ လိုက်လံခေါ်ဆောင်ကြောင်းသိရပါသည်။ လူမှုရေး/စီးပွားရေး/ပညာရေး/ကျန်းမာရေး/အချစ်ရေး/အိမ်ထောင်ရေး မည်သည့် ကိစ္စရပ်မဆို အဆင်ပြေရန် စိပ်နိုင်ပါသည်။ (108)လုံး ပုတီးဖြင့်သာစိပ်ပါ။ […]
October 18, 2018 MM Live News14 Comments on ဂုတ်၊ ဇာတ် ကျီးပေါင်း တက်နေသူများအတွက် ဗန်ဒါရွက်လေးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံလေးကို တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်
Zawgyi Version ဂုတ်၊ ဇာတ် ကျီးပေါင်း တက်နေသူများအတွက် ဗန်ဒါရွက်လေးရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးကို တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် ဂုတ်၊ ဇက် ကျီးပေါင်းတက်နေသူများ ဗန်ဒါရွက်လေးကိူခူးလိုက်ပါ။ ရေမဆေးပါနဲ့ အရွက်မှာကပ်နေတဲ့ ဖုန်လေးတွေကို အဝတ်နဲ့ ပွတ်သုတ်လိုက်ပါ။ အရွက်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ အညှာအရိုးတံလေးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဂုတ်ပေါ်နဲ့ ဇက်ပေါ်ကိုအရွက်ကို ခွပီးကပ်ထားလိုက်ပါ။ ပုံမှာကြည်ပါ။ အချို့က အကြမ်းဘက်က ကပ်ရမှာလား အချောဘက်က ကပ်ရမှာလား မေးကြလို့ပါ။ အကြမ်းဘက်ကနေ မှောက်ကပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေးဆယ့်ငါး မိနစ်လောက်ကြာရင် ကပ်တားတဲ့နေရာမှာ ပူလာပီးချွေးများ ထွက်လာပါလိမ့်မယ် ။ ခဏခွာထားပီး ငါးမိနစ်လောက်ကြာရင် ပြန်ကပ်ပေးပါ။ အရမ်းကို သိသိသာသာ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။ အခု ကျွန်တော်လဲဆေးလိမ်းစရာမလို နင်းစရာမလို လက်တွေ့သက်သာနေလို့ တင်ပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ မရှင်းတာရှိရင် မေးမြန်းလို့ရပါတယ် 09403702293 ကိုတင်။ ရေးသားသူ […]
YBS ပေါ်မှာ ရဲက ခရီးသည်အယောင်ဆောင်ပြီး လိုက်ပါသောအခါ…
October 18, 2018 MM Live News18 Comments on YBS ပေါ်မှာ ရဲက ခရီးသည်အယောင်ဆောင်ပြီး လိုက်ပါသောအခါ…
YBSပေါ်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ခရီးသည်အသွင်ဖြင့် စီးနင်းပြီး ခါးပိုက်နှိုက်မှု ကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီး YBS ခရီးသည် တင်ယာဉ်လိုင်းများပေါ်တွင်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ခရီးသည်အသွင်ဖြင့် လိုက်ပါစီးနင်းပြီး ခါးပိုက်နှိုက်မှု ကျူးလွန် သူများကို ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် ခါးပိုက်နှိုက်မှုကျူးလွန်သူ နှစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ အုပ်ချုပ်မှုဌာနခွဲမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် ၁၆.၁၀.၂၀၁၈ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၃၃၀ နာရီအချိန်တွင် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် လမ်း(၃၀)ထောင့်ရှိ ကားမှတ်တိုင် YBS ယာဉ်လိုင်းအမှတ် (၅၆)ယာဉ်ပေါ်မှ ဆင်းလာသည့် မသင်္ကာသူ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သုဝဏ္ဏ၊ (က)ရပ်ကွက်၊ အာသာဝတီလမ်းနေ ခင်မောင်(ခ)စလင်း (ခ)မိုးဇက်၊(၅၄)နှစ်နှင့် ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လမ်း၄၀(အောက်)နေသူတို့အား တွေ့ရှိသဖြင့် […]
October 18, 2018 MM Live19 Comments on သေမည့်နေ့ကိုရွှေ့ပစ်နိုင်သောကုသိုလ်များ….
မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က ဗေဒင်ကျွမ်းကျင်သော ပုဏ္ဏားမိသားစုရှိရာတွင် ပုဏ္ဏားကြီးသည် မိမိကိုယ်ကိုဗေဒင်တွက်ကြည့်ရာ…အသက်(၆၀)ပြည့်သည့်နေ့တွင် သေရမည်ကို သိလေ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားကို မကိုးကွယ်သော်လည်း သေရမည်ကိုကြောက်လန့်၍ ဘုရားထံ သွားလေ၏။ ဘုရားရှင်ထံရောက်သော် မြတ်စွာဘုရားက ” မှန်၏။ အသက်(၆၀) နေမွန်းတည့်ချိန်တွင်သေမည်။ သေလျှင် မြောက်ဘက်တောတန်းတွင် မျောက်ဖြစ်လိမ့်မည် ” ဟုဟောကြားလိုက်လေသည်။ ပုဏ္ဏားလည်း အိမ်ပြန်ပြီး မျောက်ဘဝ၌ စားရန် တောတန်းတွင်— ■ ဥယျာဉ်စိုက်၏ ■ နေရန် ဇရပ်ဆောက်၏ ■ ရေတွင်းတူး၏ ■ လမ်းဖောက်၏ ■ တံတားဆောက်၏ စသည်တို့ကို လုပ်သော် ထိုအတွက်ကြောင့်လူအများ သွားလာရပ်နားမှုအဆင်ပြေနေတော့သည်။ အသက်(၆၀) ပြည့်၍ မသေသောအခါဘုရားရှင်ထံ သွားရောက် အပြစ်တင်လေ၏။ မြတ်စွာဘုရားက ကိုယ်ကျိုးအတွက် မဟုတ်ဘဲအများအတွက် ပြုလုပ်ပေးသော အောက်ပါကုသိုလ်များသည် […]
ထိုင်းလေဆိပ်မှ မြန်မာပြည်သို့အပြန်…ရန်ကုန်လေဆိပ်လဲရောက်ရော စိတ်မကောင်းစွာကြုံခဲ့ရသော ဥူးဇင်းလေးတစ်ပါး
October 18, 2018 MM Live13 Comments on ထိုင်းလေဆိပ်မှ မြန်မာပြည်သို့အပြန်…ရန်ကုန်လေဆိပ်လဲရောက်ရော စိတ်မကောင်းစွာကြုံခဲ့ရသော ဥူးဇင်းလေးတစ်ပါး
ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ ——————— မနေ့က ဂျာမနီနိုင်ငံ ဖရန့်ဖွတ်လေဆိပ်ကနေ ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း TG နှစ်ထပ်လေယဉ်ကြီးနဲ့ မြန်မာပြည်ပြန်အလာ၊ လေဆိပ်ထဲခနစောင့်နေတုန်း၊ လေယဉ်ဝန်ထမ်းတယောက်က မိမိထံလာပီး… “မင့်ခုနံပါတ်ပြောင်းပေးလို့ရမလားတဲ့” Is it possible to change your seat number? လာပြောလာတယ်၊ မိမိအထင်တော့ ဘေးခုံက အမျိုးသမီးဖြစ်လို့နေမှာပေါ့၊ ok ရတယ် မင့်သဘောလို့၊ ခနနေတော့ လက်မှတ်အသစ်လာပြန်ပေးတယ် … ဘေးက နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က ဟ….မင့်ခုံနံပါတ်က VIP တဲ့။ အချိန်ကျတော့ ဂိတ်ကနေ လေယဉ်ပေါ်ခေါ်တော့ ရှေ့ဆုံးကနေ လက်အုပ်ချီပီး လာပင့်လာတယ်။ ထိုင်ခုံနံပါတ်ရှိတဲ့နေရာထိ ဝန်ထန်းတစ်ယောက်က လိုက်ပို့လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာဘဲ ထိုင်နေလိုက်တယ်။ လေယဉ်တာ ထွက်လာခဲ့တယ် ထိုင်ခုံ၃ခုံစလုံး တစ်ပါးထဲ။ ဘေးကလူတွေလဲ မိမိကိုသတိထားပီး ကြည့်နေကြတယ် ဘယ်လိုဘုန်းကြီးလဲပေါ့။ […]
ပေါင်တစ်သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ အဝတ်ဗီရိုနဲ့ တစ်လကိုပေါင်ငါးထောင်ကျော်မုန့်ဖိုးရနေတဲ့ ကံအကောင်းဆုံး အဖေချစ်သမီးလေး….
October 17, 2018 MM Live23 Comments on ပေါင်တစ်သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ အဝတ်ဗီရိုနဲ့ တစ်လကိုပေါင်ငါးထောင်ကျော်မုန့်ဖိုးရနေတဲ့ ကံအကောင်းဆုံး အဖေချစ်သမီးလေး….
နာမည်ကျော်ဒီဇိုင်နာချုပ်အိတ်တွေ၊ပေါင်လေးသိန်းကျော်တန်တဲ့ Fabergé လက်စွပ်၊ ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာတွေ၊ တကယ့် ထိပ်တန်း ကမ္ဘာကျော် Branded ဖိနပ်တွေ၊ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ မိတ်ကပ်အသုံးအဆောင်တွေ…. ဒါတွေဒါတွေရဲ့ပိုင်ရှင်ဟာ ဘယ်သူလို့ထင်ပါသလဲ။ နာမည်ကျော်အဆိုတော်တွေ Hollywood က ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေ မဟုတ်ရပါဘူး။ ခုမှ အသက် 18ကိုပြည့်လုပြည့်ခင်လေးရှိတဲ့ Saffron ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ ရွှေငွေရတနာတွေပါ။ သူမဘာကြောင့်ဒီလောက်ကံကောင်းချမ်းသာနေသလဲ။သူမရဲ့အရင်ဘဝက ကုသိုလ်တွေလို့ပြောရမှာဖြစ်သလိုသူမကိုသိပ်ချစ်တဲ့အဖေနှစ်ယောက်ကြောင့်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ Saffron ဟာ သန်းကြွယ်သူဋ္ဌေးလိင်တူချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ အငှားကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ အဆင့်ဆင့်ခက်ခက်ခဲခဲမွေးထားရတဲ့သမီးရတနာလေးပါ။ သူမနဲ့ သူမရဲ့ အမြွှာအစ်ကို Aspen ကို မိဘတွေကသိပ်ချစ်ကြပါတယ်။ဆိုခဲ့ပြီိးသလိုပဲ သူမမှာ လိုတရဘဝနဲ့နေလာရပြီး တစ်လကိုမုန့်ဖိုးအနေနဲ့ ပေါင်ငါးထောင်ကျော်ပုံမှန်ရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူမမှာ သူမလိုပဲမွေးထားရတဲ့ အသက်ခြောက်နှစ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ အမြွှာမောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့ အသက်ဆယ့်သုံးနှစ်အရွယ် မောင်လေးတစ်ယောက်လည်းရှိပါသေးတယ်။ Saffron ရဲ့ အသက်ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် အဖေနှစ်ယောက်က Range Rover ကားအဖြူလေးတစ်စီးလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး […]
ဒုသမ္မတနဲ့ အတူအိပ်ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ဖန်ဘင်းဘင်း
October 17, 2018 MM Live NewsLeaveaComment on ဒုသမ္မတနဲ့ အတူအိပ်ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ဖန်ဘင်းဘင်း
Zawgyi ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က မင်းသမီး ဖန်ဘင်းဘင်း ဟာတရုတ်စိုးရကို အခွန်ရှောင်မှု နဲ့ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၁၃၀ ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကို ပေးဆောင်လိုက်ရလို့ မွဲပြာကျသွား လိမ့်မယ်လို့ လူထုပရိတ်သတ်က ထင်နေခဲ့ကြတာပါ။ သို့ပေမဲ့အထင်နဲ့ အမြင်ကတော့ တလွဲစီဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ လက်ရှိအခြေအနေမှာလဲ အဆင်ပြေနေဆဲပါ။ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ သူမကို ပေကျင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ ကားအနက်ရောင်တစ်စီးနဲ့အတူ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုတွေ့ရခြင်းဟာပြဿနာအများအပြားဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်ပိုင်း သူမပထမဦးဆုံး လူထုရှေ့ကိုပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကိုအလျော်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ လက်ရှိ သူမ အဆင်ပြေနေဆဲဆိုတာသူမစီးနေတဲ့ ကားက သက်သေပြလို့နေပါတယ်။ ကားလိုင်စင်နံပါတ်ပြားမှာပါရှိတဲ့ 京A ဆိုတာနဲ့ စထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို A နံပါတ်ပြား နဲ့စတဲ့ ကားများကို အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကသာ စီးနိုင်သာဖြစ်ပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ […]
October 17, 2018 MM Live News29 Comments on ရန်ကုန်မှာ တက္ကစီယာဉ်​​မောင်း လည်​ပင်းအား၊ ဓားဖြင့်​လှီး၍ ကားလု
တက္ကစီယာဉ်​​မောင်း လည်​ပင်းအား၊ ဓားဖြင့်​လှီး၍ ကားလုယူ​မောင်း​ပြေးမှုဖြစ်​ပွား ​အောက်​တိုဘာ(၁၆)ရက်​​နေ့ည(၁၁)နာရီ(၄၅)မိနစ်​ခန့်​က၊ရန်​ကုန်​တိုင်း၊​ကျောက်​တန်းမြို့နယ်​၊​ကျောက်​တန်းမြို့ နှင့်​တံတားမြို့သို့ဆက်​သွယ်​ထား​သော၊ကားလမ်းမကြီး၊ပီလခတ်​​ဘုရား​​ကျောင်းအနီးတွင်​၊ တက္ကစီအငှားယာဉ်​(၁)စီးအား ငှားရမ်းစီးနှင်းလာသူမှ ယာဉ်​​မောင်းအား၊ လည်​ပင်းဓားဖြင့်​လှီး၍၊ကားလုယူမှုဖြစ်​ပွားခဲ့သည်​။ အခင်းဖြစ်​​နေရာသို့၊​ကျောက်​တန်းမြို့နယ်​ရဲတပ်​ဖွဲ့ မှူးရဲမှူး​အောင်​မျိုးလတ်​၊ဦးစီး၍သွား​​ရောက်​စစ်​​ဆေးခဲ့ရာ၊ လည်​ပင်းဓားဖြင့်​အလှီးခံရသည့်​ ယာဉ်​​မောင်းမှာ၊​ဇော်​မိုး​အောင်​(၄၀)နှစ်​ (ဘ)ဦး​ငွေသိန်း၊အမှတ်​(၁၅၀) ဌ /တိုးချဲ့ရပ်​ကွက်​၊​ မြောက်​ဥက္ကလာပမြို့နယ်​၊​ နေသူဖြစ်​ ပြီး၊ ၎င်းတွင်​ ဝဲဘက်​လည်​ပင်း၌၊(၄)လက်​မခန့်​ပြတ်​ရှဒဏ်​ရာ (၁)ချက်​ရရှိခဲ့သဖြင့်​၊ မြို့နယ်​ရဲတပ်​ဖွဲ့မှူးရဲမှူး​အောင်​မျိုးလတ်​မှ၎င်း ရဲကားဖြင့်​၊လူနာအားတင်​​ဆောင်​၍၊​ကျောက်​တန်းမြို့ ပြည်​သူ့​ဆေး ရုံသို့ပို့​ဆောင်​ခဲ့ရာ၊ထိုမှတစ်​ဆင့်​၊ရန်​ကုန်​ပြည်​သူ​​ဆေးရုံသို့လွဲ​ပြောင်းကုသ​စေရာ၊မြို့မရဲစခန်းမှတာဝန်​မှူးဒုရဲအုပ်​ရဲမင်းထက်​နှင့်​တပ်​သား​အောင်​မျိုးထက်​တို့မှလိုက်​ပါပို့​ဆောင်​​ပေးခဲ့သည်​။ အဆိုပါယာဉ်​​မောင်း၏​ပြောပြမှုအရ၊ ၎င်းသည်​ ည(၁၀)နာရီခွဲအချိန်​က၊ FF/5210 ၊Fielder. (ခဲ​ရောင်​) တက္ကစီယာဉ်​အား​မောင်းနှင်​လာရာ၊သာ​ကေတမြို့နယ်​၊ရှုခင်းသာလမ်း၊M.O.G.E၊ ရုံး​ရှေ့အ​ရောက်​တွင်​၊အင်္ကျီခဲ​ရောင်​ လက်​ပြတ်​/ပုဆိုးဝတ်​ဆင်​လျက်​၊​ကျောပိုးအိတ်​(၁)အိတ်​ပါရှိသူ အသားမဲကုလား၊ပုံစံလူတစ်​​ယောက်​မှ​​ ကျောက်​တန်းမြို့နယ်​၊ ပီလခတ်​ဘုရား​ကျောင်းအနီးသို့၊ အသွား/အပြန်​(၂၃၀၀၀/)ကျပ်​ဖြင့်​၊ငါးရမ်း၍လိုက်​ပါခဲ့ရာ၊ အခင်းဖြစ်​​နေရာအ​ရောက်​တွင်​၊ ကားအားရပ်​ခိုင်း ၍ […]